Cirro oo xilka laga qaadey xili Rooble fashil wajahayay | KEYDMEDIA ONLINE
Cirro oo xilka laga qaadey xili Rooble fashil wajahayay
Wuxuu ahaa shaqsi lagu tiriyo inuu ku dhaw yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo doorashadda u boobayay kuraasta Baarlamaanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Maanta xilkii laga qaadey Gudoomiyihii Gudiga Doorashooyinka Heer Federaal, Maxamed Xasan Cirro, kaasoo lagu eedeyay inuu ku milmay siyaasadda Villa Soomaaliya, islamarkaana uu gabey howshii loo igmadey.
Gudiga oo fadhi ku yeeshay Muqdisho, ayaa xilka ka qaadey Cirro, oo markii hore ka yimid dhanka Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo kusoo diray FEIT, ugana dhigay Gudoomiye labo jeer.
Xilka qaadistii ayaa kusoo beegmaysaa xili doorashadda Soomaaliya god mugdi ah kusii dhacayso, oo khilaafaadkeeda sii kordhayaan, iyadoo Rooble oo u xil-saarnaa uu tabar dhigay.
Cirro oo wariye hore ah ayaa kala qeybiyay gudiyadda intii uu talada hayay, waxaana la sheegay inuu sababay u yahay muranka taagan ee hufnaan la'aanta doorashadda Aqalka Hoose, oo illaa hadda kuraastii la doortay dhamaantood la boobey.
Rooble ayaa lagu wadaa in Dec 27 kulan la qaato madaxda Maamulada dalka, iyadoo cadaadis uga imaanayo Mushariixinta oo doonaya in shirka laga qeybgeliyo, taasoo dhinacyada diidan yihiin, maadaama uu u dhaxeeya hogaamiyeyaasha Gollaha Wadatashiga Qaran, oo ka kooban dowladda Dhexe iyo shanta Maamul oo wehliya duqa Muqdisho.